Ujeedada Dibadbax Maanta Ka Dhacay Boorama Iyo Khasaaraha Ka Dhashay – somalilandtoday.com
Ujeedada Dibadbax Maanta Ka Dhacay Boorama Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
(SLT-Boorama)-Wararka ka imanaya magaaada Boorama ee xarunta Gobolka Awdal ayaa sheegaya in maanta uu ka dhacay banaanbax lagaga soo horjeedo xadhiga Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo ay ciidamada Boolisku xabsiga dhigeen shalay.
Dibadbaxan ayaa ka dhacay saaka xaafada Sisibta ee magaalaa Boorama, waxaanay dadkaasi shacabka ahi ay dalbadanyaan in xuriyadiisa dib loogu soo celiyo Suldaanka la xidhay.
Dhinaca kale ciidamada booliska gobolka Awdal Ayaa Waxay kala dareeriyeen shacabkii mudaharaadayay dhigayey waxaana halkaasi uu dhaawac ka soo gaadhay wiil dhalinyaro ah oo ay rasaasi lugta kaga dhacday.
Sidoo waxa jira warar la isla dhexmarayo magaalada Boorama gudaheeda oo sheegaya in Suldaan Abshir loo qaaday dhinga xabsiga Mandheera, inkastoo qaar ka mid ah Waraabinta ku sugan Boorama oo la hadashay Taliska Bileyska qaybta gobolka Awdal ay beeniyeen arintaasi.
Waxaanu halka idin ku soo gudbinaynaa hadallada lagu xidhay Suldaan iyo eheladiisa oo shalay ka hadlay xadhiggiisa, Halkan hoose ka DAAWO